Eminyakeni yokugcina kokuba njalo mpikiswano eshubile mayelana yini noma cha ukuze lokugoma mass ngokumelene ne-rubella.
Rubella - isifo yegciwane okungukuthi Ukungena igciwane emzimbeni womuntu kubangela ukulimala lymph uhlelo, isikhumba, nolwelwesi lwamafinyila. Ngoba kuyefana ukwenyuka okuncane nje kwamazinga okushisa, kancane ukuqubuka evelele nokwanda yonke-lymph, ebanjwa kunjalo akukho imiphumela emithathu - izinsuku ezine. Umthombo ukutheleleka kuhlale umuntu ogulayo noma igciwane yenethiwekhi ezinsukwini zokugcina kwesikhathi bayashintshana ekufukameleni, okuvamise 11 - 21 izinsuku. Ngisho ngaphandle kokwelashwa, isifo ku pass yabo ngokusebenzisa ezimbili - izinsuku ezintathu, kusale ubufakazi amasosha omzimba ukuphila kwethu konke.
Isikhubekiso okukhulunywa ngawo: sidinga imigomo yokulwa nesimungumungwane hhayi iqiniso lokuthi lesi sifo, okuyinto liyingozi kubantu akusho ukusongela ukuthuthukiswa izinkinga ngemva kokuhlinzwa, kubangela ukuthuthukiswa kombungu esizalweni ku-fetus. Lapho ukutheleleka kwabesifazane abakhulelwe ngesikhathi ekhulelwe, ikakhulukazi senyanga yokuqala uya wakhe kwi isisu nokuguqulwa noma kuzalwa umntwana nge-rubella azalwa naso syndrome, okubandakanya yesifo senhliziyo azalwa naso, ale nkinga, izithulu futhi kanzima kahle nentuthuko neuropsychological. Ngakho-ke, lapho isifo rubella abesifazane abakhulelwe, uma double cwaningo serological eyonquma ukwanda omzimba titer esigabeni zokuqala zokukhulelwa kuphakamisa umbuzo yokugoma isimungumungwane mumps rubella. sokukhulelwa Ngaphansi esiyingozi ezinyangeni ezintathu zokuqala emva yokugoma ngokumelene rubella zizokwenziwa, kulesi simo, lokugoma Kunconywa ukuba asebenzise zokuvimbela inzalo phakathi nalesi sikhathi.
Imijovo yokugoma ngokumelene rubella uqhutshwa ngokuhambisana oda ye-Ministry of Health ngaleso yobudala:
- eneminyaka engu-izinyanga 12, - lokugoma ngokumelene isimungumungwana ne-rubella, mumps;
- engu-6 ubudala - zigonyelwe rubella, isimungumungwana, mumps ngaphambi kokungena esikoleni
- eneminyaka engu-13 - umgomo ngokumelene rubella amantombazane ongakayisebenzisi wahlushwa rubella;
- ngesikhathi eyi-18 -25 - lokugoma ngokumelene rubella uqhutshwa amantombazane nabesifazane ngaphandle umlando ulwazi ngaphambi futhi okungezona yezokwelapha enkantolo mayelana ngokugoma.
Abasekeli yokugoma mass ngokumelene rubella ubheke yokuthi eminyakeni 70-80 kwekhulu elidlule (esikhathini lapho lokugoma wayembozé uquqaba ezibanzi izingane), inani amacala rubella kwabesifazane abakhulelwe lalilincane kakhulu. Okwamanje, ngenxa ukuphazamiseka wokugoma irisidi bese kudlule usuku olunqunyiwe yokugoma, ngenxa yokwehluleka kwabazali ukuba bagome izingane-1 ngonyaka futhi engu-6, iphesenti labesifazane yokuzala abanale igazi amasosha omzimba ngokumelene igciwane rubella, iba ngokuqhubekayo aphansi futhi ngezansi. Lezi zimpikiswano futhi ukusetshenziswa yokugoma mass okubhekenwe umkhankaso wakhe for ukulahlwa ukusetshenziswa yokugoma ngesilinganiso sesizwe sonke. Ukugonywa ngokumelene rubella, ngokusho kwabanye ochwepheshe, umgomo wenziwa izinga singenele, ongenakwenziwa eqinisekisiwe kuleli zwe futhi hhayi ephelezelwa nokuqondisa okufanele yezokwelapha ngenqubo yokugoma uqobo (hhayi kwenziwe lapho ngihlolwa, futhi thermometry phambi lokugoma, umlando iguliswa akuyona wafunda). Ngaphezu kwalokho, inani lezifundo iphawula ongaphakeme titer masosha omzimba egazini zabantwana bakwa zigonywe, okungadingi ngaphandle ukuthi kungenzeka lesi sifo ngemva wawuqeda wonke lo mqulu, esihlinzeka ikhalenda imigomo ngokumelene ne-rubella. Konke Wanameka isici womuntu - uma izingane ezineminyaka engu eminyakeni 1 ngonyaka 13 ubudala kungaba "drive" ukuze umgomo ngenduku ke abesifazane kakhulu phezu kulonyaka bazoya zigonywe nge ukwenqena okukhulu.
Emphakathini wethu, lapho wonke umuntu unelungelo ukuba abe oluphelele lwazo zonke ulwazi kungenzeka yilowo nalowo wesifazane kufanele uqobo zizinqumele ukuthi engozini waphathwa rubella ngesikhathi sokukhulelwa, uma ngaphambili ayizange ubuhlungu ukutheleleka lokhu wengane, noma lapho kudingeka khona ukuba uhlole igazi khona amasosha omzimba kanye imigomo ngokumelene rubella phakathi ukuhlela sokukhulelwa.
Ankylosing spondylitis: isibikezelo ukuphila ngendlela abesifazane namadoda athile, izibuyekezo, izithombe. Indlela esiphatha ngayo ankylosing spondylitis?
Kuyini cystitis kukankosikazi?
Emgogodleni crunches: kuyingozi noma cha?
Isifo esiswini. Izimpawu kanye nokwelashwa kwezifo isisu
"TRAKLIR" (bosentan): the nozakwabo intengo. Lapho ukuthenga Traklir eshibhile
Ukuhweba lenhlangano: NACE izipesheli
Article 164 of Criminal Code: "Empangweni yezihloko izinto ezinenzuzo ekhethekile"
Inhlangano lesifanele zomsebenzi - indlela eya kahle eliphezulu
Indlela yokusebenzisa yefilakisi imbewu kwesisindo
Hlela ikhefu-ngisho: ukwakhiwa, kanye ikhefu-ngisho iphuzu ukuhlaziya. Indlela uhlela ikhefu-ngisho yebhizinisi?